Inona no kotrana mampihena na mampahia ?
Fa maninona no mila manao fanatanjahantena na mikotrana raha te hihena ?
Raha te hihena na hahia, raha ny tena marina, tsy ny ora lany nikotranana no tena mila hifantohana fa ny ora lany nihetsiketsehana ihany. Ny atao hoe mihetsiketsika dia mandeha an-tongotra matetika, tsy mipetra-dava (adiny 2 mitohy be nefa tsy mitsangana mihitsy), miaka-midina amin’ny tohatra, mandeha an-tongotra hatreny amin’ny arrêt bus fa tsy manakana ny bus eny an-dalana izay tiana eny, mandeha an-tongotra rehefa mitohana be ny fiara, mihazakazaka rehefa taraiky, mihanika tamboho rehefa tsy manana fanalahidy, mandeha mividy goûter an-tongotra fa tsy maniraka olona, mitsangana matetika mba hipipizana, mandehandeha an-tongotra rehefa fotoana hialàna sasatra (pause), manadio trano, manao lakozia, manosotra savoka, miborosy trano, manasa lamba …
Fa maninona no ilaina be ny fihetsiketsehana ?
Fampahatsiahivana : Mila hery ny vatana, ary azony avy amin’ny sakafo hanina izany hery izany. Ny hery miohatra izay omentsika ny vatana dia hangoniny amin’ny endrika tavy … raha toa ka tsy ampiasaina. Ahoana no hampiasana izany hery izany ? Amin’ny fietsiketsehana : rehefa miteny isika, na miaina, na mandeha an-tongotra, na matory, na rehefa mitempo ny fo, na rehefa manoratra isika, na milalao amin’ny finday, na mandihy, …
Izany hoe : Ny kotrana na ny fanatanjahantena, na ny fihetsiketsehana, dia manampy ny vatana handany ny ampahan’ny hery miohatra izay azony.
Mazava ho azy fa ny miteny dia tsy mandany hery kokoa noho ny mandeha an-tongotra sy ny mihazakazaka.
Impiry isan’andro no tokony hikotrana raha te hihena na hahia ?
Mila mikotrana 5 na 6 andro isan-kerinandro mandritra ny 30 minitra isan’andro raha sady tsy te hihena no tsy te hatavy (stabiliser son poids). Ary raha te hihena na te hahia, mila mikotrana 5 na 6 andro isan-kerinandro mandritra ny 45 minitra hatramin’ny adiny 1 isan’andro. Raha tsapanao fa tsy vitanao zany dia zarazarao izany fotoana izany. Ohatra :
mba tsy hikotranana mandritra ny 30 minitra tsy an-kijanona, mikotràna 15 minitra in-2 isan’andro (15 minitra ny maraina ary 15 minitra indray ny hariva ohatra) ;
mba tsy hikotranana mandritra ny 45 minitra tsy an-kijanona, mikotràna 15 minitra in-3 isan’andro ;
mba tsy hikotranana mandritra ny adiny 1 tsy an-kijanona, mikotràna mandritra ny 30 minitra in-2 isan’andro na 15 minitra in-4 isan’andro.
Raha mihevitra ianao fa lava loatra izany 15 minitra izany, andramo ary ny tsy mifankahita amin’ny sipanao/vadinao raha tsy mandritra ny 15 minitra isan’andro. Araky ny téorian’ny Einstein dia toa ny mandeha haingana ny fotoana rehefa manao zavatra tiana ianao. Nefa toa ny ela be izany rehefa tsy tiana ny atao.
Mitadiava kotrana izay tianao ! Ary araraoty ny fotoana hanananao. Oh : Mikotrana rehefa misy delestazy na tapaka ny jiro, eo am-piandrasana ny fiverenany fa tsy hoe tsy manao na inona na inona na matory fotsiny.
Inona avy ary ny kotrana tsara hatao raha te hihena ?
Mila ovaovaina ny kotrana atao satria mihazatra amin’ny fihetsika hataonao ihany ny vatana rehefa ela ny ela. Sady ho leo ny mamerimberina ireny fihetsika ireny no hiafaranao. Ary farany, ny fihetsika tsirairay dia mampiasa hozatra iray na maromaro samihafa. Manaova izany salady de fruit amin’ny kotrana.
1. Ny fandehanana an-tongotra
Mba hihenana hahihizana, mila mihetsiketsika matetika. Ny olona be fihetsiketsehana dia mahavita mandingana an-tongotra in-10.000 isan’andro farafahakeliny. Nefa ny ankabeazantsika dia efa sahirana vao mahavita 3.000 isan’andro.
Dingan-tongotra 10.000 isan’andro ? Tsy vita izany, hoy ianao ? Nefa mora kely ny mahavita izany. Mila mampiasa fika majinijinika mba handehanana an-tongotra matetika : mandeha an-tongotra rehefa mandeha mianatra, mandeha an-tongotra fa tsy mandeha bus, mandeha an-tongotra hatreny amin’ny arrêt bus fa tsy manakana ny bus eny an-dalana rehetra eny, mihidina amin’ny fiara rehefa mitohana ny fiara ary tohizana amin’ny dia an-tongotra ny ambin’ny lalana, mandeha an-tongotra rehefa hody, mandeha an-tongotra rehefa hividy goûter ary mandeha alavidavitra kokoa, mandeha miantsena an-tongotra, misotro rano betsaka dia mitsangana matetika mba hipipizana, tsy mampiasa tavoahangy mba hanasiana rano fa kaopy kely dia mitsangana matetika mba hamenoana rano io kaopy io, mandehandeha eran’ny trano rehefa mandray antso amin’ny finday, …
Sady, ireny dingana an-tongotra 10.000 ireny dia ny toatalin’ny dingana an-tongotra rehetra mila hatao mandritra ny tontolo andro : isaina ao anatiny izany ny dingana ataonao rehefa mandeha mipipy ianao, na mandeha mandro, na mandeha maka ny kiraronao any amin’ny efintrano hafa, … Ny dingana REHETRA mandritra ny tontolo andro.
Mba hanisana izany isan’ny dingana an-tongotra vitanao izany dia mila mampiasa podomètre.
Na mividy iray : nahita aho tany amin’ny La City Ivandry, nefa miohatra ny 100.000Ar ny vidiny ;
Na maka application amin’ny findainao ianao (android na Iphone) : nefa ny finday sasany, na android aza tsy mahazaka izany application izany.
Tena ilaina be io mandeha an-tongotra io raha te hanena kibo ianao.
2. Ny cardio
Ny teny hoe « cardio » dia nagalana ny teny hoe « cœur » na « fo ». Ny cardio dia ny kotrana rehetra izay mampitempotempo be ny fo. Tsy ny mihazakazaka ihany no atao hoe cardio. Fa mety ho mitsambikimbikina, manao zumba, miaka-mihidina haingana be amin’ny tohatra, mandeha an-tongotra haingana, manao squats haingana be, … Afaka hatao ho cardio daholo izany raha toa ka mampitempotempo be ny fonao.
Ny cardio dia mila hatao 5 na 6 andro isan-kerinandro mandritra ny 30 minitra isan’andro farafahakeliny raha te hihena. Ny tsara dia io no hatao farany indrindra.
Io kotrana io no tena mandaitra be indrindra raha te handoro ny tavy. Izay no mahatonga ny mpihazakazaka ho manify be.
3. Ny kotrana izay mampiasa poids
Tsy miresaka fibatana fonjam-by aho eto fa ny mikotrana sady mampiasa poids kely. Oh : manao squat miaraka amin’ny poids 5 kg eny amin’ny tanana roa, mikotrana sandry miaraka amin’ny poids 2 kg, …
Mampitombo ny haben’ny hozatry ny lehilahy ireny kotrana ireny nefa manatsara ny bikan’ny vehivavy. Raha toa ka manana bika mahitsy be toa ny « I » ny mpihazakazaka, ny vehivavy mikotrana miaraka amin’ny poids kosa dia tsara bika, tsara « constitution » hoy isika, na hoe tsara « formes » : boribory sady tsy miroraka ny fitombenany, misongadina tsara ny valahany, tsy fisaka ny nonony, … Sady tena mandaitra be ireny kotrana ireny raha te hihena.
Ny ankabeazan’ny vehivavy anefa dia matahotra mafy ny manao ireny karazana kotrana ireny sao ho lasa toa ny lehilahy hono na ho lasa be hozatra na bokona be loatra. Fantaro aloha ratovovavy sy ramatoa fa ny vatan’ny vehivavy dia tsy hitovy MIHITSY amin’ny an’ny lehilahy.
Voalohany indrindra, ny vatan’ny lehilahy dia mamokatra testostérone (hormones lahy) bebe kokoa noho ny an’ny vehivavy. Nefa, ny testostérone no mampihena haingana ny lehilahy ka mahatonga azy vetivety dia hita fa nihabokona. Ary ny œstrogène (hormone vavy) dia mandrisika ny fitahirizan’ny vatana ny tavy ka mahatonga ny hozatra hananantsika hiafina foana ao ambanin’ny tavy.
Faharoa manarak’izay, ny vehivavy izay bokona « be loatra » izay hitanareo amin’ny sary ka mampitahotra anareo ireny dia mihinana protéines en poudre. Izay mahatonga azy ho bokona be. Raha ho an’ny bodybuildeuses sasany indray dia mitsindrona stéroïdes.
Farany indrindra, araka ny efa voalazako : ireo kotrana ireo dia tsy mahabokona ny vehivavy. Marina aloha fa hihenjakenjana ny hozatrao, nefa tsy hitovy amin’i Arnold Schwarzenegger tamin’ny hatanorany izany ianao satria tsy mikotrana be toa azy izany. Fa ho tsara bika kokoa ianao, hahazo « formes », ho tsara « constitution » ianao. Iza no tsy te hahita ny valahany hiavaka ?
Ny kotrana izay mampiasa poids dia mila hatao 3 andro isan-kerinandro farafahakeliny mandritra ny 15 minitra raha te hihena.
4. Ny kotrana abdos
Ireo no kotrana tena ataon’ny vehivavy betsaka indrindra raha te hanena kibo izy.
Nefa fantaro fa ny kibo fisaka dia tsy miankina amin’ny isan’ny abdos vitanao, fa amin’ny fomba fisakafohananao. Sady ny abdos dia mikolo ny hozatry ny kibonao fotsiny, izany hoe mahahenjakenjana azy, mahamafy azy. Izay no antony mahatonga anao tsy mety mahazo kibo fisaka na tsy mety mihena ny kibonao na dia manao abdos aza, fa mihamafy be fotsiny ny hozatry ny kibonao. Raha te hanana kibo fisaka marina ianao, mila mifantoka bebe kokoa amin’ny cardio satria iny no mandoro ny tavy.
Ireny kotrana abdos ireny dia mila hatao 2 andro isan-kerinandro mandritra ny 5 minitra isan’adro farafahakeliny raha te hanana kibo fisaka. Ary 5 minitra dia efa mahampy aza.
Ireo kotrana rehetra ireo, raha tena te hihena ianao, dia tsy maintsy manaraka ireto lalàna 5 ireto :
Tsy maintsy mampitempotempo be ny fo ;
Tsy maintsy mahatsemboka ;
Tsy maintsy mampisefosefo ka ho sahirana mihitsy ianao vao mahateny ;
Tsy maintsy kotrana tiana ;
Ary farany : tsy maintsy manaraka ireo lalàna 4 rehetra izay notanisaina teo ireo, fa tsy misy mahazo latsaka na iray aza.